Bortezomib poda (179324-69-7) hplc≥98% | AASraw R&D Reagents
/ Products / MaR & D Reagents / Bortezomib upfu (179324-69-7)
Rating: SKU: 179324-69-7. Category: MaR & D Reagents
ICHINYANYA ndechekugadzirisa uye kugadzira zvigadzirwa kubva ku gram kusvika kuhutano hweBortezomib powder (179324-69-7), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Bortezomib iri mishonga inopesana nekenza uye yekutanga kurapwa kweproteasome inhibitor inoshandiswa kuvanhu. MaProteasomes ndiwo majekesi anokonzera mapuroteni. Mune mamwe makondombera, mapuroteni anowanzouraya kenza masero anononoka zvakanyanya. Bortezomib inokanganisa izvi uye inobvumira mapuroteni iwayo kuuraya masero ekenza. Inogamuchirwa muUnited States neEurope kuburikidza nekurapazve zvekare myeloma uye mantle cell lymphoma. Mune multiple myeloma, zvakazara zvipatara zvinopindurwa zvakawanikwa kune varwere vane zvimwe zvinopesana kana kuti vachikura nokukurumidza zvirwere.
Bortezomib powder video
Bortezomib powder Basic Characters
Name: Bortezomib powder
Molecular Kurema: 384.24
Melt Point: 122-124 ° C
Storage Temp: -20 ° C Freezer
Color: Yakachena kusvika kune chena che Crystalline powder
Raw Bortezomib powder mukushandiswa
Boronic acid, Velcade, Neomib, Bortecad
Bortezomib powder Usage
Bortezomib powder mishonga inopesana nekenza uye yekutanga kurapwa kweproteasome inhibitor inoshandiswa kuvanhu. MaProteasomes ndiwo majekesi anokonzera mapuroteni. Mune mamwe makondombera, mapuroteni anowanzouraya kenza masero anononoka zvakanyanya. Bortezomib powder inovhiringidza urongwa uhwu uye inoita kuti mapuroteni iwayo auraye masero ekenza. Inogamuchirwa muUnited States neEurope kuburikidza nekurapazve zvekare myeloma uye mantle cell lymphoma. Mune multiple myeloma, zvakazara zvipatara zvinopindurwa zvakawanikwa kune varwere vane zvimwe zvinopesana kana kuti vachikura nokukurumidza zvirwere.
Iyo aton boron muBortezomib poda yakasunga inoshandisa nzvimbo inoshandiswa ye 26S proteasome nehukama hwepamusoro uye zvakananga. Mune masero mashoma, proteasome inodzora mapuroteni kutaura uye kushanda nekuderedza kweprotein ye ubiquity, uye inochenesa sero reprotein. Kliniki nedzimwe tsanangudzo dzinochengetedza zvinotsigira chikamu pakuchengetedza kusingaperi kwechirootype yemaseloma masero, uye masero-tsika uye xenograft data inotsigira basa rakafanana mune zvakasimba tumarara yekenza. Kunyange zvazvo nzira dzakawanda dzingangodaro dzichibatanidzwa, proteasome inhibition inogona kudzivirira kuora kwepro-apoptotic factors, nokudaro zvichiita kuti purogiramu yakagadzirirwa kufa mueoplastic cells. Munguva pfupi yapfuura, yakawanikwa kuti Bortezomib powder yakakonzera kuchinja nokukurumidza uye kunoshamisa mumazinga eepradide intracellular iyo inogadzirwa neproteasome.  Dzimwe peptide inopellular yakave yakaratidza kuti inoshandiswa nehupenyu, uye naizvozvo zvinokonzera Bortezomib raw powder on iyo mazinga eepracellular peptide anogona kuita kuti zvipenyu uye / kana zvikamu zvinokonzerwa nemishonga.
Bortezomib powder inobatanidza neropa reuropathy mu30% yevarwere; dzimwe nguva, zvinogona kuva zvinorwadza. Izvi zvingave zvakanyanya kuipa kune varwere vane utano husati hwavapo. Mukuwedzera, myelosuppression inokonzera neutropenia uye thrombocytopenia inogonawo kuitika uye kuve nekudzivirira. Zvisinei, izvi zvinowanzova zvinyoro zvinyoro zvishoma nemapfupa emapfupa ekuputika uye mamwe maitiro ekurapwa kwevarwere vane zvirwere zvakanyanya. Bortezomib poda yakasanganiswa inosanganiswa nehupamhi hwemapuranga, kunyange zvazvo prophylactic acyclovir inogona kuderedza ngozi yeiyi. Acute interstitial nephritis yakave ichitaurirwawo.
Gastro-intestinal (GI) zvinokonzerwa uye asthenia ndiyo zviitiko zvinowanzovhiringidza.
Anticancer zvinokonzerwa neBergenomib poda yakasvibiswa sejenisi imwe chete yakaratidzwa mu xenograft mhando dze multipleel myeloma, munhu mukuru T-cell leukemia, mapapu, chifuva, prostate, pancreatic, musoro nemutsipa, nekenza yekoloni, uye mu melanoma. Oral Bortezomib powder 1.0 mg / kg zuva nezuva kwemazuva 18 inokonzera kuora kwekukura kukurumidza, pamwe nekuderera kwehuwandu hwemastastase mumuenzaniso wekenza yemapapu Lewis. Bortezomib powder pamusana mumwe chete we5 mg / kg zvakanyanyisa kuderedza chikamu chinoramba chiripo chemazamu masero emvere. Bortezomib powder 1.0 mg / kg inotarirwa vhiki nevhiki kwemavhiki e4 inoderedza kuora kwekuraira ne 60% mu murine xenograft mhando dzekenza yeprostate. 1.0 mg / kg Bortezomib raw powder administration kwemasvondo e4 inoguma ne 72% kana 84% kuderedza mupancreatic kenza murine xenografts kukura, pamwe nekuwedzera kwechirwere chema cell apoptosis. 1.0 mg / kg Breathenomib mishonga yokurapa inoguma mukudzivirira kukuru kwevanhu plasmacytoma xenograft kukura, kuwedzerwa mumarara masero apoptosis uye kuponeswa kwese, uye kuderera kwechirwere chinonzi angiogenesis.
Warning on Bortezomib raw powder
Targeting the ubiquitin-proteasome pathway yakabuda senzira yepamusoro mukurapa kenza yevanhu. Kubva pane zvakanyatsotaridzika uye zvidzidzo zvezvipatara, Bortezomib powdyi yakasvibiswa yakagamuchirwa kuitira kliniki kushandiswa sepamberi-mishonga kurapwa kwevachangobva kuongororwa vese varwere vangu myeloma uye nekurapwa kwekudzokazve / kukanganisa multiple myeloma uye mantle cell lymphoma, iyo iyi mishonga ine kuva chirafu chekurapa. Kubvumirwa kweBoltezomib powder neU.S. Food and Drug Administration (FDA) yakaratidza chiitiko chakakosha sokutanga kweproteasome inhibitor inoshandiswa pakurapa zvirwere zvinouraya. Bortezomib poda yakaratidza hutano hwakanaka huripo huri kana woga kana sechikamu chechirongwa chekubatanidza kuita chemo- / radio-senitization kana kukurira kusagadzikana kwezvinodhaka. Imwe yenzira dzakakosha dzeBurtezomib powder dzinobatanidzwa nebasa rayo reticancer ndezvekugadziriswa kweNoXA, iyo proapoptotic protein, uye NOXA inogona kusangana nemaprotinist anti-apoptotic eBcl-2 subfamily Bcl-XL neBcl-2, uye mugumisiro mune apoptotic cell inouraya mumasero anouraya. Imwe nzira yakakosha yeBortezomib poda yakasvibiswa ndeyokuderedza kweNF-κB nzira yekucherechedza inoita kuti pasi-mutemo we-anti-apoptotic inorwisa majene. Kunyange zvazvo ruzhinji rwekubudirira runowanikwa neBortezomib powder rave riri muhematological malignancies, maitiro aro kumakumbo akaoma ave asina kukurudzira. Uyezve, kushandiswa kwekliniki yakawanda yeBortezomib powder inoramba ichidzivirirwa nekuratidzika kwechirwere-kukonzera kutyisa, kushandiswa kwemishonga uye kupindira kwezvimwe zvikamu zvakasikwa. Izvi zvakawanikwa zvinogona kubatsira kutungamira vanachiremba mukuchenesa kushandiswa kwekliniki yeBortezomib raw powder, uye kukurudzira masayendisiti ezvokutanga kuunza chizvarwa chinotevera proteasome inhibitors chinowedzera hutachiwana hwehutano uye huchigadzira chigarire chinogadziriswa chechirwere chepachirwere chevanorwara nekenza. Zvimwe zvinodikanwa zvinoshandiswa pakushandiswa kweproteasome inhibitors zvinosanganisira kukura kwe inhibitor maererano neExNicX ligases, iyo inotanga kuchitsauko mudhipatimendi ye ubiquitin-proteasome, uye kuwanikwa kwepasi shoma uye inoverengeka yeproteasome inhibitors kubva kumigadzirwa yemagariro nemishonga yemagariro, iyo inogona kupa vashandi vakawanda vanogona kushandisa mishonga yekenza chemoprevention uye kurapwa kwekenza varwere mune ramangwana.
Bortezomib powder chirwere chinodzivisa mammalian 26S proteasome. Nzira inonzi ubiquitin-proteasome inoita basa rinokosha pakugadzirisa maitiro emaprotini akasiyana-siyana, zvichidaro kuchengetedza homeostasis mukati memasero. Kuvhiringidzika kwe26S proteasome kunodzivirira ichi chinonzi proteolysis, icho chinogona kukanganisa kazhinji kuisa maziso mukati memusero. Izvi zvinopesana nemaitiro evakadzi ekupedzisira anokonzera kutungamirira kusero. Ongororo dzakaratidza kuti Bortezomib poda yakasviba ndiyo cytotoxic kune zvakasiyana-siyana zvekenza masero mu vitro. Bortezomib yai yakashata inokonzera kunonoka kwechirwere kukura mu vivo mune zvisingabatanidzi mamoramiro emhando, kusanganisira multiple myeloma. Tumorome masero, ndiko kuti, kuparadzanisa masero mashoma, anoita seanonyanya kunetseka neproteasome inhibition.
Bortezomib powder is inveritor reversible yemabasa echymotrypsin-akaita ye 26S proteasome mumasero emammalian. I26S proteasome ipuroteni yakakura yakaoma inoshatisa mapuroteni akawanda. Nzvimbo inoshanda yeproteasome ine chymotrypsin-like, trypsin-like, uye postglutamyl peptide hydrolysis basa. I26S proteasome inonyadzisa mapuroteni akasiyana-siyana anotsanangurira kenza yemazuva mashoma, zvakadai semakwikwi, tumor suppressors, BCL-2, uye cyclin-dependent kinase inhibitors. Kuvhiringidzika kwezvinhu izvi kukuvadza kunoita kuti masero ave apoptosis. Bortezomib pfumbu yakakosha inopisa inhibitor ye 26S proteasome, iyo inokurudzira basa mukuparadzanisa masero akawanda e myeloma uye eukemic, zvichiita kuti apoptosis iite. Mukuwedzera, Bortezomib powder inowedzera kuwedzera kunzwisiswa kwekenza masero kune tsika dzemaitiro anticancer agents (eg, gemcitabine, cisplatin, paclitaxel, irinotecan, uye radiation).
Bortezomib Raw Powder
Raw Bortezomib powder Marketing
Nzira yekutenga Bortezomib powder kubva kuAASRAW
Febuxostat powder (144060-53-7)